ဒိုးမယ် - Page 25 of 31 - နေရာသစ်များကို ရှာဖွေကြပါစို့!
စျေးနှုန်းချိုသာပြီး အရသာကောင်းတဲ့စမ်းချောင်းကထိုင်းဆိုင်ကောင်းလေး တစ်နေရာသို့
အရင်တစ်ပတ် နေ့လည်က Admin တို့ Doemal အဖွဲ့ စမ်းချောင်းဘက်ကို လျောက်လည်ခဲ့ကြတယ်။ လျောက်လည်နေရင်း မိုးလေးက တစ်ဖွဲဖွဲစရွာလာပြီး ဗိုက်ကလည်းဆာလာတာနဲ့ မိုးခိုရင်း ပူပူနွေးနွေး ချဉ်ချဉ်စပ် စပ်စားလို့ရမယ့် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာ နေ့လည်စာ ဝင်စားမယ်ဆိုပြီး လမ်းလျောက်လာ လိုက်တာ မင်္ဂလာလမ်းနဲ့...
ရေပေါ်ဟိုတယ်က ဘားကောင်းလေးတစ်ခု V – Bar & Lounge
Vintage Luxury Yacht ဟိုတယ်ကတော့ ၁၉၂၀ ခုနှစ်ဒီဇိုင်းပုံစံ ပြုလုပ်ထားပြီး ၅ထပ်ရှိတဲ့ရေပေါ်ဟိုတယ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မူထူးခြားလှတဲ့ ဘားကောင်းကောင်းလေးတွေမှာ စားသောက် ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတွေအတွက် Vintage Luxury Yacht Hotel ကတော့ တစ်ခေါက်လောက်...
အာရွတြင္ အေကာင္းဆုံးထိပ္တန္း စားေသာက္ဆိုင္ ၅ ဆိုင္
လူတွေရဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေကအရေးပါလှတဲ့ နေရာကနေပါဝင်လို့နေပါတယ်။ဒါ့အပြင် အခမ်းအနား အထိမ်းအမှတ်ပွဲများဖြစ်ကြတဲ့ မွေးနေ့၊နှစ်ပတ်လည်၊မင်္ဂလာဆောင်များကိုလဲ စားသောက်ဆိုင်များတွင်ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိချစ်ခင်နှစ်သက်ရသူ၊မိသားစု၊သူငယ်ချင်းများကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထား ဂရုစိုက်ကြောင်းကို နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းများတွင် ညစာတူတူစားခြင်းဖြင့်လည်းဖော်ပြတတ်ကြပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် Doemal ကနေ အာရှမှာအကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်၅ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Gagganစားသောက်ဆိုင် Gagganစားသောက်ဆိုင်ကတော့ အာရှမှာအကောင်းဆုံးနံပါတ်တစ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုအဖြစ် ၂၀၁၇မှာ သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီး...
Brolly Sky Bar မှာ ရှုခင်းကြည့်ရင်း ကော့တေးသောက်ကြမယ်။
အသက်ကလေးရယ်တဲ့ ရှည်စေလို၊ မန်းတောင် ရိပ်ခို ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း မန္တလေးဆိုတာနဲ့ မန္တလေးတောင်ကိုပါ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ မန္တလေးရောက်တုန်းရောက်ခိုက်လေးမှာ မန္တလေးတောင် ရဲ့ ညနေခင်း နေဝင်ဆည်းဆာ အလှနဲ့ မန္တလေးမြို့ရဲ့ ညအလှရှုခင်းကို အပေါ်စီးကနေ မြင်ကွင်းကောင်းကောင်းနဲ့ တဝကြီး ခံစားလိုက် ​ရမယ်ဆိုရင်​...
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း ယမကာများ
ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့် အခမ်းအနားပွဲတွေမှာ အဖျော်ယမကာ တွေက တကယ်ကို အရေးပါလှတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးယခင်ကတည်းကစတင်ပြီး ယနေ့ အချိန်ထိ ယမကာတွေကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့် တီထွင် ကြိုချက်ကာ ရိုးရာ ပွဲတော်များ၊ ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သောက်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ယခုဆိုရင်လည်း စျေးကွက်ထဲတွင်...
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် ရုံးပိတ်ရက်က အိမ်မှာအေးအေး မုန့်စားပြီး စာဖတ်မယ်လို့ အစီအစဉ်ချခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အစီအစဉ်နှင့်ကိုယ် အခန်းထဲသွား၊ ခုံပေါ်မှာထိုင်၊ မုန့်လေးဖောက်၊ စာအုပ်ကို ဖွင့်ပြီး စာဖတ်မယ်လုပ်နေတုန်း မမျှော်လင့်ပဲ မီးက ပျက်သွားတော့ မှောင်မဲသွားပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ရဲ့ ဇိမ်ယူမယ့် အစီအစဉ်လေးက ပျက်သွားလေသတည်းပေါ့ဗျာ။...
မန္တလာမြေက Thai 35
ဒီတစ်ခေါက် မ န္တလေးက အမျိုးတွေဆီ သွားလည်တုန်းက နေရာစုံလျှောက်လည်ပြီး အမှတ်တရတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ အပျော်ဆုံးအချိန်ကတော့ မပြန်ခင်ည ညစာစားတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ အဲ့ဒီညက ညစာကောင်းကောင်းလေးစားချင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့် အမျိုးတွေက ထိုင်းအစားအစာကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့ ဆိုင်ကို သူတို့ သိတယ်တဲ့။ အဲ့တာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့...
လသာမှာ ကင်ပေါ့စားရင်း Milk tea သောက်ရအောင်။
လသာ ဆိုတာရန်ကုန်မြို့မှာ အစားအသောက်ချစ်သူတိုင်းရဲ့ အသည်းစွဲနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကောင်းတွေ ရရှိနိုင်တဲ့ ဆိုင်တွေအများကြီး ရှိတဲ့ အဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ပြန်ရရိုးထုံးစံ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုအစားအသောက်ကောင်းတွေ ပေါများတဲ့ လသာ မြို့နယ်မှာ အရသာ ရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို ရရှိနိုင်မယ့် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ”Doemal” အက်ပလီကေးရှင်းမိတ်ဆက်ပွဲနှင့် ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၉ရက်နေ့ သောကြာနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Code2LAB Co.,Ltd က မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်း အသစ်ဖြစ်တဲ့ “Doemal” ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲကို ပုလဲကွန်ဒိုမှာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Launch ပွဲလေး အောင် မြင်စွာ ကျင်းပ...
အီတာလျှံ ပီဇာ ကမ္ဘာသို့ အလည်တစ်ခေါက်
အရင်တပတ်သောကြာနေ့ကမြို့ထဲမှာယောင်တောင်ပေါင်တောင်လျှှေက်သွားရင်းကနေ စွန်းမိုက်တဲ့ အီတာလျှံ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှာတွေ့ ခဲ့တယ်ဗျာ။ ဆိုင်လေးရဲ့နာမည်ကလည်းအဆန်းဗျ၊ “ P for Pizza “ တဲ့။ နာမည်လေးကိုကချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်ဟုတ်? အဲ့တော့ ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တော့ဘူးဝင်ကြည့်မိတော့တာပေါ့ဗျာ။ ဆိုင်လေးက ဗိုလ်ချုပ်စျေးအနောက်ဘက်တင်ဗျ အတိအကျဆို ယောမင်းကြီးလမ်း အဆုံးနားလောက်မှာ...